Taariikhda My Butros » Ma la oggolyahay iyo On Samaynta Hordhac Dating First
Ma la oggolyahay iyo On Samaynta Hordhac Dating First
Last updated: Jan. 21 2021 | < 1
Sida uu xubin ka yahay Date My Butros, aad hal fursad u diro farriin hordhaca ah in kulan aad u hesho. Sidaas ha ka xishoon; tani qayb ka ciyaari doona weyn ee guul-aragnimo shukaansiga online.
Ka hor inta aanad bilaabin, halkan waxaa ku yaala dhawr talo oo ku saabsan sida in ay ka fogaadaan soo socda guud ahaan aad uga xoog badan ama samaynta dhiibi akhristaha…
Of – Sharciga wanaagsan!
A iftiin kaakala, fariin Salel qanciyo doonaa dadka kale in aad tahay qof aad u faraxsan in ay la noqon. Waxaad tagi lahaa qof ka caban ay hore horeba ama qof ku faraxsanahay in aad kulan?
Ha – Qor Novel ah
A yar weedho noqon doonaa kaamil ah, laga yaabaa xataa tuur ee kaftan ama laba? Laakiin ay ka mid yihiin sheeko noloshaada yeelan doontaa dadka ku dhow fariinta inta ay ka gaarayaan baaragaraafka seddexaad…
Of – Ku dar faahfaahin qaar ka mid ah
Dadka u ogolaato in la ogaado waxa aad doonaysid in aad hoos u soo koobto doonaa mailkooda in xubno ka tirsan kuwaas oo raadinaya wax la mid ah. Waxay jecel yihiin inay paragliding maalmaha fasaxa ah? Eebaha, qof kale oo aad u samayn Doonto!
Ha – Noqo hadal haynta badan
Haa aad si fiican u nooca laga yaabaa in, daryeel, jecel, iwm daacad. laakiin waxaan u dhan maqlay hor. Akhristaha wuxuu rabaa inuu ogaado adiga kugu saabsan, siiya in iyaga ka dhigaa inay doonayaan in ay aad fariin ka mid ah qof kasta oo kale.
Hadda waxaad tallaabo dheeraad ah dhinaca kulanto qofka aad wada mustaqbalka tahay (sida xiiso leh!), si aad u hesho qoraal qabsiga, dhigay ilaa taariikhaha qaar ka mid ah oo aad ka dib na mahad karaan…hadda bilaabay.
Marka waa "Right Time" Si aad u raacdeeya xidhiidh cusub?
6 Sababaha Maxaad Health Good fiican yahay Xiriirka
Waa maxay Point guurka?
RUNTA Fool saabsan Dating casriga ah
Sida loo sameeyo Open Xiriirka Shaqada